Jack Dorsey သည် Block ၏သတ္တုတူးဖော်ရေးစနစ်ကိုအတည်ပြုသောကြောင့် Bitcoin hash နှုန်းသည် ATH သို့ခုန်တက်သွားသည်။ - Token Myanmar
Jack Dorsey သည် Block ၏သတ္တုတူးဖော်ရေးစနစ်ကိုအတည်ပြုသောကြောင့် Bitcoin hash နှုန်းသည် ATH သို့ခုန်တက်သွားသည်။
Bitcoin (BTC) hash rate သည် အဓိက hash rate ပံ့ပိုးသူကို ဆုံးရှုံးသွားသော်လည်း အချိန်တိုင်း အမြင့်ဆုံးသို့ ပြန်သွားပါသည်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကြားထဲက စျေးလျော့ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်စီအီးအို Jack Dorsey ကို ပိတ်ဆို့ထားသည်။ အတည်ပြုခဲ့သည်။ ပွင့်လင်းသော Bitcoin တူးဖော်မှုစနစ်တစ်ခုဖန်တီးခြင်း။
BTC အာကာသသည် အံ့သြဖွယ်ကောင်းပြီး ဝေဖန်သူများနှင့် ရူးသွပ်သူများ ဆက်လက်တည်ရှိနေပါသည်။ ကာဇက်စတန်၊ ကွန်ရက်၏ ဒုတိယအရေးအကြီးဆုံး BTC တူးဖော်ရေးနိုင်ငံ၊ ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ်က လူထုမငြိမ်မသက်မှုများကြောင့် အင်တာနက် ပြတ်တောက်မှု ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။. သို့သော်၊ အချိန်တိုင်းအမြင့်ဆုံးသို့ရောက်ရှိရန် ပြန်လည်မစုစည်းမီ hash နှုန်းသည် 13.4% ထက်မပိုပါ။
အောက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်း data from Glassnodeစျေးနှုန်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့်အတူ မနေ့က $42,000 ပါဝင်ပါတယ်။ပျမ်းမျှ ဟက်ရှ်နှုန်းသည် တစ်စက္ကန့်လျှင် 215 သန်း terahash အထိရောက်ရှိခဲ့သည်။
Bitcoin မိုင်းလုပ်သားများသည် ခံနိုင်ရည်ရှိမှုကို ဆက်လက်ပြသပြီး Fidelity Digital Assets များကို လေ့လာတွေ့ရှိထားသည့်အတိုင်း ကွန်ရက်သည်ပင်လျှင် “ကမ္ဘာတဝှမ်းတွင် ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာ ဖြန့်ဝေခဲ့သည်။
Cointelegraph သည် Block သည် 2022 တွင် open-source Bitcoin သတ္တုတူးဖော်ရေးစနစ်များကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေမည်ဟုယခင်ကဖော်ပြခဲ့သည်။ Linkedin တွင် အလုပ်တင်ခြင်းများကြောင့်. မနေ့က Jack Dorsey က ဒီအချက်ကို အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ retweeting လုပ်ခြင်း။ Block မှ အထွေထွေမန်နေဂျာ Thomas Templeton မှ မှတ်ချက်ပေးသည်။
တွစ်တာစာတွဲတွင် Templeton သည် ရရှိနိုင်မှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် BTC သတ္တုတူးဖော်ခြင်းဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်များနှင့်ပတ်သက်သည့် ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းခဲ့သည်။ အနှစ်ချုပ်အားဖြင့်၊ Block ၏ ရည်မှန်းချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
“ဝယ်ယူမှု၊ တပ်ဆင်မှု၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု၊ သတ္တုတူးဖော်မှုအထိ နည်းလမ်းပေါင်းစုံဖြင့် ပိုမိုထိရောက်စွာ တူးဖော်ရရှိစေလိုပါသည်။ သတ္တုတွင်းတူးခြင်းသည် bitcoin အသစ်ဖန်တီးခြင်းထက် သာလွန်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ဝင်စားပါသည်။ အပြည့်အဝ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုကင်းစင်ပြီး ခွင့်ပြုချက်မရှိသော အနာဂတ်အတွက် ရေရှည်လိုအပ်ချက်အဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့မြင်သည်။”
ဆက်စပ်- Jack Dorsey သည် Bitcoin တရားဝင်ကာကွယ်ရေးရန်ပုံငွေကိုကြေငြာခဲ့သည်။
BTC သတ္တုတူးဖော်ရေးစနစ်ကို "ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ" နှင့်အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်အတူတည်ဆောက်ခြင်းသည်အဓိပ္ပာယ်မရှိပေ။ Econoalchemist၊ အိမ်တွင်း BTC တူးဖော်သူနှင့် BTC မဂ္ဂဇင်းထည့်ဝင်သူ၊ တွစ်တာတင်ခဲ့သည်။ Open Source တွင် ထုတ်ကုန်များကို တီထွင်ထုတ်လုပ်ခြင်းသည် "လက်ရှိတွင် နာမည်ကောင်းမရှိသော ယုံကြည်မှုကို တည်ဆောက်နိုင်ပြီး သုံးစွဲသူများ၏ မျှော်လင့်ချက်များကို ထိုဦးတည်ချက်သို့ ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။"
အဆုံးစွန်အားဖြင့်၊ Block ၏သတ္တုတူးဖော်ရေးဖြေရှင်းချက်များသည် အာကာသထဲသို့ DIY မိုင်းလုပ်သားများ ပိုမိုဝင်ရောက်လာစေရန် လမ်းခင်းပေးနိုင်သည်။
hash နှုန်းအတွက် ကောင်းကင်ကြီးသည် ကန့်သတ်ချက်ရှိပုံရသည်။ ကွန်ရက်အခက်အခဲ ပြန်လည်သတ်မှတ်သည့်အခါ အနည်းဆုံး လာမည့် 2016 ခုနှစ်အထိ လုပ်ကွက်များ။
admin 85175 posts0comments
ရုရှား၏ Tinkoff ဘဏ်သည် ဆွစ်ဇာလန်ကုမ္ပဏီများထံမှ ဝယ်ယူမှုမှတစ်ဆင့် Crypto Space သို့ ဝင်ရောက်သည် – ငွေကြေးဘဏ္ဍာရေး Bitcoin သတင်း
Crypto- Report ကို ဆက်လက်ထိန်းထားရန် အင်္ဂလိပ်ဥပဒေအား တရားစီရင်ရေးအကြံပေးအရာရှိက တောင်းဆိုထားသည်။